चिकित्सा शिक्षाको परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीको बिगबिगी, जेहनदार विद्यार्थी मारमा – Upahar Khabar
प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७८, मंगलवार ११:३७ April 5, 2022
चिकित्सा शिक्षा आयोगले यही मिति २०७८ साल चैत्र १८ गते लिइएको एमबिबिएस लगायतका अन्य परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीहरुको बिगबिगीले चिकिस्था शिक्षा आयोगको तयारी र गुणस्तरमाथि नै प्रश्नचिन्ह​​ खडा गरेको छ । स्वास्थ​ जस्तो संवेदनशील विषयमा भएका यस्ता लापरवाहीले भयानक परिमाण ल्याउने कुरामा दुईमत छैन ।
झण्डै २० % भन्दा बढी नक्कली परीक्षार्थीहरुको सहभागीताले त डाक्टर बन्ने सपना बोकेका हजारौं विद्यार्थीहरूको सपना, सपना नै रहने देखिन्छ । २० % नक्कली परीक्षार्थीहरुको कुरा आउँदासम्म पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग मौन बसेको छ । नेपालमा लिइने परीक्षामा भारतीय दलालको संलग्नता देखिएको हुनाले, के त्यस क्षेत्रकै मानिसको संग्लनता त छैन? भन्ने कुराको जाँच चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्नुपर्छ । बायोम्याट्रीक हाजिरी लिने प्रावधान भएपनि त्यो किन लागू हुन सकेन? त्यसको उत्तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिनु पर्छ ।
विगतका दिनमा चिकित्सा क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमितता, कमी-कमजोरी रोक्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरियो तर उपलब्धि भने पाउन सकिएन । यसरी नक्कली परीक्षार्थीहरु खडा गरी परीक्षा दिने जस्ता कार्यले गर्दा जेहन्दार विद्यार्थीहरूको डाक्टर बन्ने सपना नै चकनाचुर​ बनाएको छ । छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न वर्षौं कुरेका विद्यार्थीहरूको जीवनमाथि खेलवाड भएको छ । एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरु नै नक्कली परीक्षार्थी भए पछि अरुले कसरी छात्रवृत्ति पाउने ? त्यसैले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो लापरवाहीको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ, आजसम्म भएका कमी-कमजोरी अबको दिनमा पनि हुन सक्छ त्यसैले अहिले नै आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
विचारक​ भट्ट चिकित्सा शिक्षाको परीक्षार्थी हुन् ।
दार्चुलाको महाकालीमा एमालेको सुरुआती अग्रता, पछ्याउँदै काँग्रेस